‘यी चार महिनामा जन्मिने महिलामा हुन्छ लक्ष्मीको रुप – Sandesh Munch
वृष :वृष राशीको स्वामी शुक्र हो जसका कारण वृष राशिका मानिसहरु शुक्र ग्रह बाट प्रभावित हुन्छन।
कर्कट राशी : कर्कट राशिका मान्छेहरु लक्जरी वस्तुहरु प्राप्त गर्ने इच्छा गर्छन् । यी मानिसहरु पुरै जिन्दगी बिलासितामा बिताउने शोख राखछन् जुन उनीहरुको भाग्यमा लेखियको हुन्छ र पुरा गर्न समेत सक्षम हुनेछन् । उनीहरु कडा परिश्रम गर्न समेत पछि पर्दैनन् त्यसैले उनीहरु प्रशस्त धन आर्जन गर्न सक्छन ।
यस राशिका मान्छेहरूको भाग्य सधैं उनीहरुसँग हुन्छ, जसको कारण उनीहरु धनी बन्न सक्छन ।
सिंह : यस राशिका मान्छेहरु आफ्नो नेतृत्व विकासका सबन्धमा क्षमतवान हुन्छन । यिनीहरुमा कुनैपनि संघ-संगठन वा राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमता रहेको हुन्छ । यी राशिका मानिसहरुमा अन्य १०० जनाले गर्ने कामको एक्लै सिद्ध गर्न सक्ने क्षमता रहेको हुन्छ ।
यिनीहरु कहिले पनि धनको पछाडी दौड्दैनन् तर उनीहरुको लक्जरी अवश्यकता पुरा गर्नका लागि मेहेनतका साथै कडा परिश्रम गर्ने गर्छन ।
Prevतपाईले सपनामा ‘मन्दिर गएको’ देख्नुभएको छ ? यस्तो हुन्छ संकेत
Nextआजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने
जब सासु बाहिर जानुहुन्थ्यो, ससुराले मौका छोपिहाल्नुहुन्थ्यो
शिब श्रेष्ठले खुलाए बुढेसकालमा अर्को बिहे गर्नुको कारण : छोराछोरीको संख्या ६ पुग्यो
सपनामा मृ’त मान्छेले यस्तो चिज दिए खुल्यो भाग्य भिडियोसहित
यी ३ ब्यक्तिले तुलसीको पूजा कहिल्यै नगर्नुहोस घोर अनर्थ हुन्छ